ဂိုးတှေ မရယူနိုငျတဲ့ ယူနိုကျတကျရဲ့ အဓိက ပွသနာက ဘာလဲ ၊ ဒီအတှကျ အဖွရှေိလား ဆိုတာ ပွောကွားလိုကျတဲ့ #ပါကား - SPORTS MYANMAR
ဂိုးတှေ မရယူနိုငျတဲ့ ယူနိုကျတကျရဲ့ အဓိက ပွသနာက ဘာလဲ ၊ ဒီအတှကျ အဖွရှေိလား ဆိုတာ ပွောကွားလိုကျတဲ့ #ပါကား
မနျခကျြစတာ ယူနိုကျတကျ အသငျး ဟာ ဒီ ရာသီ ပရီးမီးယား လိဂျ ပွိုငျပှဲ မှာ ပှဲစဉျ9ပှဲ ကစား ပွီးနောကျ ရဂိုး 10 ဂိုး ၊ ရမှတျ 10 မှတျသာ စုဆောငျး ထားနိုငျခဲ့ ပါတယျ ။ အခုတော့ ယူနိုကျတကျ ကစားသမား ဟောငျး ဖွဈသူ ပေါလျ ပါကား က အသငျး ဟောငျးမှာ ဒီ ပွသနာ အတှကျ အဖွေ ရှိပုံ မပျေါကွောငျး ထုတျဖျော ပွောကွား သှားခဲ့ လိုကျ ပါတယျ ။
ဒါ့အပွငျ ယူနိုကျတကျ အနေ နဲ့ ပွိုငျဖကျ ခံစဈ နဲ့ ရငျဆိုငျ ကွုံတှေ့ တဲ့ အခါ ဘောလုံး ကို လငျြမွနျစှာ ကိုငျ ကစား နိုငျဖို့ လိုအပျ ကွောငျး ၊ လကျရှိ အသငျး ဟာ အဲ့တာ ကို လုပျဆောငျ နိုငျစှမျး မရှိ ကွောငျး ပေါလျ ပါကား က ဆကျလကျ ပွောကွား သှားခဲ့လိုကျ ပါတယျ ။
” ယူနိုကျတကျ မှာ ပှဲစဉျ ကို အသကျ သှငျး ကစား ပေးနိုငျ မယျ့ ကစားသမား လုံလုံလောကျလောကျ မရှိ ပါဘူး ။ သူတို့ တှဟော ဘောလုံး ရယူ နိုငျဖို့ ပွေးလှား လှုပျရှာ မှု မရှိ သလို ပွိုငျဖကျ ဂိုး ဧရိယာ ထဲကို လညျး ဝငျရောကျ ထိုးဖောကျ နိုငျစှမျး မရှိကွ ပါဘူး ”
” ဥပမာ အနေ နဲ့ ပွောရမယျ ဆိုရငျ မကျ တျောမီနေး ဟာ ပွိုငျဖကျ ဂိုး ဧရိယာ ထဲ လုံလောကျစှာ ဝငျရောကျ ကစား နိုငျခွငျး မရှိ ပါဘူး ” လို့ ပေါလျ ပါကား က ပွောကွား သှားခဲ့ လိုကျပွီး ဆရာဟောငျး ဖာဂူဆနျ လကျထကျ တုနျးက ဆိုရငျ အသငျး ရဲ့ ကစားသမား တှဟော တာဝနျ ပိတာ မြိုး လုံးဝ မရှိ ခဲ့ ကွကွောငျး ဆကျလပျ ပွောကွား သှားခဲ့ လိုကျ ပါတယျ ။
” အဲ့ဒီ တုနျးက ကြှနျတျော တို့ ဘယျလောကျ ပိုကောငျး နိုငျမလဲ ဆိုတာ ကို ပွသ ရုံ ပါပဲ ။ ကနျြတာ က ကြှနျတျော တို့ သခြော လုပျဆောငျ ရမယျ့ သီးခွား တာဝနျ ရှိနေ ခဲ့ကွ ပါတယျ ။ ကြှနျတျော တို့ အတှကျ ညှနျကွား ခံရမှု တှေ မြားစှာ မရှိ ခဲ့ ပါဘူး ။ အဲ့တာ လေးတှေ ဝတျကြေ အောငျ လုပျရငျး ပို လုပျပွ နိုငျအောငျ ကွိုးစား ခဲ့ရ ပါတယျ ”
” ကြှနျတျော တို့ ခံစဈ ရဲ့ အရှေ့ မှာ တဈကယျ့ ကို ကောငျးမှနျ တဲ့ တိုကျစဈ ကစားသမာ6းယောကျ ရှိခဲ့ ကွ ပါတယျ ။ သူတို့ တှကေ ကြှနျတျော တို့ အလုပျ လုပျရ လှယျကူ အောငျ လုပျဆောငျ ပေးကွ တယျလေ ” လို့ ပေါလျ ပါကား က သူတို့ တုနျးက အနေ အထား တှနေဲ့ နှိုငျးယှဉျ ပွောကွား သှားခဲ့ လိုကျပွီး လီဗာပူး နဲ့ ပှဲစဉျ က လယျလာနာ ကို မဟနျ့တား နိုငျ ခဲ့တဲ့ ယနျး အပျေါ …
” ယနျးဟာ ခံစဈ ကစားသမား အဖွဈ ကစား ခဲ့ ရတာ နှဈတှေ အတျော ကွာခဲ့ ပါပွီ ။ ဒါပမေယျ့ သူဟာ အခု ထကျထိ တောငျပံ တိုကျစဈ ကစားသမား တဈဦး လိုပဲ ခံစဈ ကစား နတေုနျး ပါ ။ ပွိုငျဖကျ ကို ဘယျလို ခွရောခံ ပွီး လိုကျရ မလဲ ဆိုတာ သူ မသိ ပါဘူး ။ ခငျဗြား အနေ နဲ့ ပွိုငျဖကျ ကို အခြိနျ တိုငျး လလေ့ာ စောငျ့ကွညျ့ နရေ ပါ့မယျ ။ လူကြှံဘော ဖွဈနေ လား ဆိုတာ က အစ ပေါ့ ”
” တိုကျစဈ ကလညျး ကွာလေ ကစားရ ခကျခဲ လေ ဖွဈနေ ပါတယျ ။ တိုကျစဈ မှာ ခွထေောကျ မွနျတဲ့ သူနဲ့ ဆုံးဖွတျခကျြ မွနျတဲ့ သူတှေ မရှိ ပါဘူး ။ ဒါ့အပွငျ ဖနျတီး နိုငျမှု စှမျးရညျ လညျး မရှိ ပါဘူး ။ မာတာ ဟာ ဒီမှာ တော့ အလကား ဖွဈနေ သလို ပါပဲ ။ သူ့ရဲ့ ပုံစံ က မနျစီးတီး ကစားပုံ နဲ့ပဲ ပိုပွီး ကိုကျညီ နေ ပါတယျ ” လို့ ပေါလျ ပါကား က ပွောကွား သှားလိုကျ ပါတယျ ။
အဲ့ဒီနောကျ အသငျး ရဲ့ ကှငျးလယျ ကစားသမား ဖွဈသူ ပေါလျ ပေါ့ဂျဘာ အနေ နဲ့ ကှငျးလယျ တိုကျစဈ နရော ဖွဈတဲ့ နံပါတျ 10 နရော မှာ ကစား တာက ပိုပွီး အဆငျ ပွမှော ဖွဈကွောငျး ၊ ဒါပမေယျ့ သူဟာ အသငျး ပွောငျးဖို့ သတငျးကွီး နခေဲ့တာ ကွောငျ့ လကျရှိ အသငျး အတှကျ အကောငျးဆုံး လုပျနိုငျ မလား ဆိုတာ မသခြော ကွောငျး ပေါလျ ပါကား က ဆကျလကျ ပွောကွား သှားခဲ့ လိုကျ ပါတယျ ။
” ပေါ့ဂျဘာ သာ တဈကယျတမျး အလို ရှိ နမေယျ ဆိုရငျ ခွားနားခကျြ တှကေို လုပျဆောငျ ပေးနိုငျ ပါတယျ ။ ဆိုးလျရှား က ပါရဲရား နဲ့ ရှဆေ့ကျ ဦးမလား ? လီဗာပူး နဲ့ ပှဲစဉျ တုနျးက သူ့ရဲ့ ဆုံးဖွတျခကျြ တှဟော အားနညျး ခဲ့ ပါတယျ ။ သူက နိုငျပှဲ ရရှိ နိုငျမယျ့ ပေးပို့ မှုနဲ့ ဂိုးတှေ ကနျသှငျးဖို့ လောကျပဲ စိတျဝငျစား နခေဲ့ သလို ပါပဲ ”
” ပါရဲရား ထကျ ပိုပွီး ဂါနာ တို့ ဂရငျးဝုဒျ တို့ကို နရော ပေးပွီး သုံးစှဲ သှားလို့ မရ နိုငျဘူး လား ? လကျရှိ အခြိနျ ပှဲ ကစား နတေဲ့ သူတှေ က ဘာတှေ လုပျပေး နိုငျကွ သလဲ ၊ ဘယျလို အံ့အား သငျ့ဖှယျ တှကေို လုပျဆောငျ နိုငျ သလဲ ဆိုတာ ကို ဘယျသူ မှ မသိရှိ ကွ ပါဘူး ” လို့ ပေါလျ ပါကား က ပွောကွား သှားခဲ့ ပါတယျ ။
ဂိုးတွေ မရယူနိုင်တဲ့ ယူနိုက်တက်ရဲ့ အဓိက ပြသနာက ဘာလဲ ၊ ဒီအတွက် အဖြေရှိလား ဆိုတာ ပြောကြားလိုက်တဲ့ #ပါကား
မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် အသင်း ဟာ ဒီ ရာသီ ပရီးမီးယား လိဂ် ပြိုင်ပွဲ မှာ ပွဲစဉ်9ပွဲ ကစား ပြီးနောက် ရဂိုး 10 ဂိုး ၊ ရမှတ် 10 မှတ်သာ စုဆောင်း ထားနိုင်ခဲ့ ပါတယ် ။ အခုတော့ ယူနိုက်တက် ကစားသမား ဟောင်း ဖြစ်သူ ပေါလ် ပါကား က အသင်း ဟောင်းမှာ ဒီ ပြသနာ အတွက် အဖြေ ရှိပုံ မပေါ်ကြောင်း ထုတ်ဖော် ပြောကြား သွားခဲ့ လိုက် ပါတယ် ။
ဒါ့အပြင် ယူနိုက်တက် အနေ နဲ့ ပြိုင်ဖက် ခံစစ် နဲ့ ရင်ဆိုင် ကြုံတွေ့ တဲ့ အခါ ဘောလုံး ကို လျင်မြန်စွာ ကိုင် ကစား နိုင်ဖို့ လိုအပ် ကြောင်း ၊ လက်ရှိ အသင်း ဟာ အဲ့တာ ကို လုပ်ဆောင် နိုင်စွမ်း မရှိ ကြောင်း ပေါလ် ပါကား က ဆက်လက် ပြောကြား သွားခဲ့လိုက် ပါတယ် ။
” ယူနိုက်တက် မှာ ပွဲစဉ် ကို အသက် သွင်း ကစား ပေးနိုင် မယ့် ကစားသမား လုံလုံလောက်လောက် မရှိ ပါဘူး ။ သူတို့ တွေဟာ ဘောလုံး ရယူ နိုင်ဖို့ ပြေးလွှား လှုပ်ရှာ မှု မရှိ သလို ပြိုင်ဖက် ဂိုး ဧရိယာ ထဲကို လည်း ဝင်ရောက် ထိုးဖောက် နိုင်စွမ်း မရှိကြ ပါဘူး ”
” ဥပမာ အနေ နဲ့ ပြောရမယ် ဆိုရင် မက် တော်မီနေး ဟာ ပြိုင်ဖက် ဂိုး ဧရိယာ ထဲ လုံလောက်စွာ ဝင်ရောက် ကစား နိုင်ခြင်း မရှိ ပါဘူး ” လို့ ပေါလ် ပါကား က ပြောကြား သွားခဲ့ လိုက်ပြီး ဆရာဟောင်း ဖာဂူဆန် လက်ထက် တုန်းက ဆိုရင် အသင်း ရဲ့ ကစားသမား တွေဟာ တာဝန် ပိတာ မျိုး လုံးဝ မရှိ ခဲ့ ကြကြောင်း ဆက်လပ် ပြောကြား သွားခဲ့ လိုက် ပါတယ် ။
” အဲ့ဒီ တုန်းက ကျွန်တော် တို့ ဘယ်လောက် ပိုကောင်း နိုင်မလဲ ဆိုတာ ကို ပြသ ရုံ ပါပဲ ။ ကျန်တာ က ကျွန်တော် တို့ သေချာ လုပ်ဆောင် ရမယ့် သီးခြား တာဝန် ရှိနေ ခဲ့ကြ ပါတယ် ။ ကျွန်တော် တို့ အတွက် ညွှန်ကြား ခံရမှု တွေ များစွာ မရှိ ခဲ့ ပါဘူး ။ အဲ့တာ လေးတွေ ဝတ်ကျေ အောင် လုပ်ရင်း ပို လုပ်ပြ နိုင်အောင် ကြိုးစား ခဲ့ရ ပါတယ် ”
” ကျွန်တော် တို့ ခံစစ် ရဲ့ အရှေ့ မှာ တစ်ကယ့် ကို ကောင်းမွန် တဲ့ တိုက်စစ် ကစားသမာ6းယောက် ရှိခဲ့ ကြ ပါတယ် ။ သူတို့ တွေက ကျွန်တော် တို့ အလုပ် လုပ်ရ လွယ်ကူ အောင် လုပ်ဆောင် ပေးကြ တယ်လေ ” လို့ ပေါလ် ပါကား က သူတို့ တုန်းက အနေ အထား တွေနဲ့ နှိုင်းယှဉ် ပြောကြား သွားခဲ့ လိုက်ပြီး လီဗာပူး နဲ့ ပွဲစဉ် က လယ်လာနာ ကို မဟန့်တား နိုင် ခဲ့တဲ့ ယန်း အပေါ် …
” ယန်းဟာ ခံစစ် ကစားသမား အဖြစ် ကစား ခဲ့ ရတာ နှစ်တွေ အတော် ကြာခဲ့ ပါပြီ ။ ဒါပေမယ့် သူဟာ အခု ထက်ထိ တောင်ပံ တိုက်စစ် ကစားသမား တစ်ဦး လိုပဲ ခံစစ် ကစား နေတုန်း ပါ ။ ပြိုင်ဖက် ကို ဘယ်လို ခြေရာခံ ပြီး လိုက်ရ မလဲ ဆိုတာ သူ မသိ ပါဘူး ။ ခင်ဗျား အနေ နဲ့ ပြိုင်ဖက် ကို အချိန် တိုင်း လေ့လာ စောင့်ကြည့် နေရ ပါ့မယ် ။ လူကျွံဘော ဖြစ်နေ လား ဆိုတာ က အစ ပေါ့ ”
” တိုက်စစ် ကလည်း ကြာလေ ကစားရ ခက်ခဲ လေ ဖြစ်နေ ပါတယ် ။ တိုက်စစ် မှာ ခြေထောက် မြန်တဲ့ သူနဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက် မြန်တဲ့ သူတွေ မရှိ ပါဘူး ။ ဒါ့အပြင် ဖန်တီး နိုင်မှု စွမ်းရည် လည်း မရှိ ပါဘူး ။ မာတာ ဟာ ဒီမှာ တော့ အလကား ဖြစ်နေ သလို ပါပဲ ။ သူ့ရဲ့ ပုံစံ က မန်စီးတီး ကစားပုံ နဲ့ပဲ ပိုပြီး ကိုက်ညီ နေ ပါတယ် ” လို့ ပေါလ် ပါကား က ပြောကြား သွားလိုက် ပါတယ် ။
အဲ့ဒီနောက် အသင်း ရဲ့ ကွင်းလယ် ကစားသမား ဖြစ်သူ ပေါလ် ပေါ့ဂ်ဘာ အနေ နဲ့ ကွင်းလယ် တိုက်စစ် နေရာ ဖြစ်တဲ့ နံပါတ် 10 နေရာ မှာ ကစား တာက ပိုပြီး အဆင် ပြေမှာ ဖြစ်ကြောင်း ၊ ဒါပေမယ့် သူဟာ အသင်း ပြောင်းဖို့ သတင်းကြီး နေခဲ့တာ ကြောင့် လက်ရှိ အသင်း အတွက် အကောင်းဆုံး လုပ်နိုင် မလား ဆိုတာ မသေချာ ကြောင်း ပေါလ် ပါကား က ဆက်လက် ပြောကြား သွားခဲ့ လိုက် ပါတယ် ။
” ပေါ့ဂ်ဘာ သာ တစ်ကယ်တမ်း အလို ရှိ နေမယ် ဆိုရင် ခြားနားချက် တွေကို လုပ်ဆောင် ပေးနိုင် ပါတယ် ။ ဆိုးလ်ရှား က ပါရဲရား နဲ့ ရှေ့ဆက် ဦးမလား ? လီဗာပူး နဲ့ ပွဲစဉ် တုန်းက သူ့ရဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက် တွေဟာ အားနည်း ခဲ့ ပါတယ် ။ သူက နိုင်ပွဲ ရရှိ နိုင်မယ့် ပေးပို့ မှုနဲ့ ဂိုးတွေ ကန်သွင်းဖို့ လောက်ပဲ စိတ်ဝင်စား နေခဲ့ သလို ပါပဲ ”
” ပါရဲရား ထက် ပိုပြီး ဂါနာ တို့ ဂရင်းဝုဒ် တို့ကို နေရာ ပေးပြီး သုံးစွဲ သွားလို့ မရ နိုင်ဘူး လား ? လက်ရှိ အချိန် ပွဲ ကစား နေတဲ့ သူတွေ က ဘာတွေ လုပ်ပေး နိုင်ကြ သလဲ ၊ ဘယ်လို အံ့အား သင့်ဖွယ် တွေကို လုပ်ဆောင် နိုင် သလဲ ဆိုတာ ကို ဘယ်သူ မှ မသိရှိ ကြ ပါဘူး ” လို့ ပေါလ် ပါကား က ပြောကြား သွားခဲ့ ပါတယ် ။